မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ ကုန်ကျမည့် COVID-19 တုန့်ပြန်ရေးအစီအမံ ကုလသမဂ္ဂပြင်ဆင်ထား | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalမြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ ကုန်ကျမည့် COVID-19 တုန့်ပြန်ရေးအစီအမံ ကုလသမဂ္ဂပြင်ဆင်ထား
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ ကုန်ကျမည့် COVID-19 တုန့်ပြန်ရေးအစီအမံ ကုလသမဂ္ဂပြင်ဆင်ထား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၂၀၀) ကုန်ကျမည့် ပြင်ဆင်၊ တုန့်ပြန်ရေး အစီအမံကို ပြင်ဆင်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး Ola Almgren က အိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီဖို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၂၀၀) ကျော် ကုန်ကျမယ့် ပြင်ဆင်၊ တုန့်ပြန်ရေးအစီအမံကို ရေးဆွဲထားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေအတွက်လည်း မိတ်ဖက်တွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အစီအမံတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်နေသလို အခုလို ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဥ်ကာလအတွင်းမှာ လူသားချင်စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အင်အားကောင်းလာဖို့ အလှူရှင်တွေဆီကနေ နောက်ထပ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅ သန်း ရှာဖွေနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအပြင် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေနဲ့ အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ထို့အတူ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်သော COVID-19 ကြောင့် မတ်လ ကုန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ရုံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၅၀၀၀ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ ဝန်ထမ်းပေါင်း ခုနစ်သိန်းအနက်မှ သုံးသိန်းခွဲခန့်သည် လစာမဲ့ခွင့်ပေးခံရခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံ သံရုံးက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှိ ဒုက္ခရောက်နိုင်ခြေရှိသော အလုပ်သမားများနှင့် သွေးစည်းရပ်တည်သည့် အနေနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်ကူ(“Quick Assistance”) ရန်ပုံငွေ ယူရို ၅ သန်း (၇.၉ ဘီလျံကျပ်) ကို လက်ရှိအခက်အခဲ အဆင်ပြေနိုင်စေရန်အတွက် Wave Money မှ တစ်ဆင့် အလုပ်သမားများအား ပေးဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီလ ၉ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
United Nations have developedaCountry Preparedness and Response Plan, that will cost more than $200 million in support of the public health response, Mr. Ola Almgren, UN Resident and Humanitarian Coordinator, said in his op-ed published in the Myanmar Times on April 27.
“We have developedaCountry Preparedness and Response Plan costed at more than US$200 million in support of the public health response, and we are working with bilateral partners and financial institutions to mobilise the necessary resources. We are adjusting our humanitarian plans and seeking an additional $45 million from donors to strengthen the humanitarian response in the face of the pandemic,” he added.
The UN, he said, works closely with the Ministry of Health and Sports as well as other parts of government involved and recently delivered 20,000 COVID-19 test kits to the National Health Laboratory with 30,000 more due to arrive.
Moreover, European Union, on April 9, has also announced the aid program called Quick Assistance using Euro5million to provide K 75,000-125,000 to workers, who lose the jobs or whose jobs are suspended.
Previous articleCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard
Next articleCovid-19 Fund ချေးငွေမှ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ကို ထုတ်ချေးမည်